သထုံမြို့နယ်လုံး ဆိုင်ရာ ကရင်အမျိုးသား လူငယ်အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် စည်းရုံး - Yangon Media Group
သထုံမြို့နယ်လုံး ဆိုင်ရာ ကရင်အမျိုးသား လူငယ်အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် စည်းရုံး
သထုံ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁ဝ
မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ကရင်အမျိုးသားလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် စည်းရုံးရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး ဆွေး နွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နံနက် ၉ နာရီက မွန်ပြည်နယ်သထုံမြို့နယ် နောင်ဘိုကျေးရွာကဿဖတိုက် ကျောင်းတွင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အခမ်းအနားတွင်တက် ရောက်လာကြသူများက ကရင်အမျိုးသားအလံတော်အား အလေးပြု ကြပြီး ကရင်အမျိုးသားသီချင်းအား သံပြိုင်သီဆိုကာ ကရင်တိုင်းရင်း သားဘာသာရေးအကြီးအကဲများနှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားမြို့မိ၊ မြို့ဖ ဦး စောဘသိန်းတို့က သြဝါဒစကား ပြောကြားသည်။
ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အား အကျိုးဆောင်ရွက်သူများအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသော ကရင်ရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များမှ မိမိတို့သဘောထားအမြင်များ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအား လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုများအား မှတ်တမ်းရယူ၍ သထုံမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ က ရင်အမျိုးသားလူငယ်အဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် စည်းရုံးရေးကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။
”သထုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စ တွေမှာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နဲ့ တတ်စွမ်းသမျှ ပံ့ပိုးကူညီပေးနိုင်ဖို့အတွက် သထုံမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ ကရင်အမျိုးသားလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတည်ဆောက်ဖို့အတွက် စည်းရုံးရေးကော်မတီကို အရင်စဖွဲ့တာပါ။ စည်းရုံးရေးကော်မတီထဲက ကော်မတီဝင်တွေနဲ့ အလုပ် အဖွဲ့ဆပ်ကော်မတီတွေကို ဒီဆွေး နွေးပွဲမှာ တာဝန်တွေခွဲဝေအပ်နှင်းတာပါ”ဟု နောင်ဘိုကျေးရွာမှ ဒေသခံ စောမိုးလေးက ပြောသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲသို့ သထုံမြို့နယ်ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစောစံတင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ သထုံမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာများမှက ရင်တိုင်းရင်းသား၊ တိုင်းရင်းသူ ဒေသခံများ တက်ရောက်ခဲ့ကြ ကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်တော့်အတွက် အိမ်ထောင်ရေး ဆိုတာကတော့ မရိုက်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား တစ်ခုလိုပါပဲ” ဘုဏ်း?
မန်ဝိန်းကြီး တိမ်းရှောင်စခန်း၌ လူဦးရေများပြားနေပြီး ရေ၊ အိမ်သာနှင့် လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ??